Nhau - Pamusoro pemutengo, ndezvipi zvimwe zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa kana uchitenga chiratidzo chejammer?
Pamusoro pemutengo, ndezvipi zvimwe zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa kana uchitenga chiratidzo chejammer?
Zviitiko izvo zvinofanirwa kutariswa musarudzo yenhare mbozha jammer michina
Sarudzo yenharembozha jammer yakanakira iwe. Usavimba chero mhando hombe. Mutengo hausi iwo chinhu chikuru kana. Kunyangwe iyo mbozhanhare mbozha jammer inokodzera inogona kuonekwa kubva kukambani dzakasiyana zvitifiketi, zvishandiso zvinoshandiswa, uye kugadzirisa dambudziko rekugadzira tekinoroji. Iko kune zvimwe zvakakosha zvekusarudza nharembozha jammer. Kana paine kunyoreswa kwekambani zviri pamutemo, kungave kune chiratidzo chakanyoreswa, nezvimwewo, unogona kukumbira mugadziri kuti ape nharembozha jammer yekukanganisa pikicha, zvemukati chimiro mafoto, nezvimwewo zvese kutonga nharembozha jammer Basic zviyero. . Kubva pamifananidzo yekukanganisa, zvinogona kuoneka kana kuwanda kweiyo nharembozha jammer yakaenzana uye kune yakasarudzika, kunyangwe iyo frequency yekubvisa simba rehupamhi inokodzera, ichokwadi here kuti pane zvishanu zvinobuda mune izvo zvinobuda zvisere kunze, uye inowanikwa kuti vatengesi vazhinji vasina hunhu mumusika vanokwezva vatengi nemitengo yakaderera. Neiyi nzira, kuburikidza nenzira dziri pamusoro, zvirinani zvinogona kutongwa kuti haina kugadzirwa mumafekitori madiki uye nemashopu madiki, uye hunhu hwakavimbiswa.
Ungaenzanisa sei inodzivirira mudziyo paramende basa:
Kana iwe ukatenga foni mbozhanhare jammer chishandiso, unogona kuenzanisa ma parameter uye mashandiro e data rekugadzirisa data kuti uone kana uchigona kudzivirira CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G / 4G nharembozha inodzivirira mune yakazara frequency band. Kunyangwe chiteshi chega chega chine simba rakaringana kuburitsa, zveshuwa, iyo yakawanda chiteshi kuburitsa, zvirinani iyo yekudzivirira maitiro. Nyika yakakura, uye vanoshanda mukutaurirana munyika yega yega vakasiyana, uye netiweki dzematanho dzakatorwa munzvimbo dzakasiyana dzakasiyana zvakare. Kune vatengi pachavo, vanofanirwa kuziva kwatinofanira kushandisa michina uye mhedzisiro yatinoda kuti tiite, uye vowana nyanzvi yekugadzira michina yekukurudzira yakakodzera inotsigira michina kwauri zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa uye nenyika yekushandisa.
Parizvino, mitengo muindasitiri inodzivirira indasitiri ichiri kushata. Nekuba matanda uye nekuchinja machira, kushandisa feki, kudzikisa simba, kunyepa kwenhema, nezvimwewo, mutengo wemidziyo unongoreva chete, kwete iyo inodhura zvirinani. Zvirinani kusarudza vagadziri vane hunyanzvi vanogona kupa kwenguva yakareba mushure mekutengesa masevhisi. Kutengesa dzimwe nguva kwepfungwa, kwete zvigadzirwa. Iko kukosha kwepamoyo pachako.
Post nguva: Oct-17-2020